Aqoon yahan Aragti ka arradan! - Caasimada Online
Home Maqaalo Aqoon yahan Aragti ka arradan!
INDHEERgarad ma joogoo
GALBEEDAYNTA: Kan Galbeedka ka yimidna, wuxuu isu arkaa AQOON YAHAN tagay, oo kaan sidiisa oo kale wax ku soo baran GALBEEDKA uusan waxba aqoon, kaba darane, inta isaga ka soo harta ee aan sidiisoo kale ugu halqabsan karin eray LAATIIN ah ama ANGLO SAXON ahwuxuu u arkaa BADOW GEELJIRE ah, oo ILBAXNIMADA ka dheer! Illeen isagaa darkii ILBAXNIMADA ka soo dhurtaye, aanse hore u qaadan WADAAN ama DALOW xiran, oo markaa la yimid EBERE! aqriste, adba SHABAQ BIYO KU DHUR! Waa meeshii laga dhihi jiray: “Hal Bacad lagu lisay” ama “Bacaad ayuu qoor Sagaaro ku hayaa!”